Leo ny mailaka? Solony hafa hitantanana mailaka amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Leo ny mailaka? Safidy hafa hitantanana mailaka amin'ny iPad: Incredimail, Mail + ho an'ny Outlook ary Evomail.
Rehefa mitady mpitantana mailaka ho an'ny iPad isika, rehefa ampiasainay amin'ny asany indrindra, dia manana safidy maromaro izahay: Incredimail, Mail + ho an'ny Outlook y Evomail. Ny zavatra voalohany tsy maintsy raisintsika dia raha toa ka ny tena tadiavintsika dia ny maso hafa amin'ny mpitantana mail iPad mahazatra, na raha mitady programa izay manao zavatra hafa tsy hitantsika isika. Ireo fampiharana malaza toy ny Gmail, MailBox, Yahoo Mail ... dia tsy mahasoa satria ny tenany ihany no voafetrany hifandray amin'ireo mpizara mailaka azy ireo ary tsy manana fifandraisana amin'ireo antoko fahatelo izy ireo.
Incredimail. Estetika no tsara indrindra amin'ny rehetra. Rehefa miditra ao anaty boaty ny hafatra dia mihodina ny taloha mba hanome toerana ho an'ireo vaovao. Azonao atao ny manamboatra kaonty POP / IMAP, ICloud, Gmail, GMX, Yahoo ary AOL marobe. Raha ampiasaina amin'ny alàlan'ny kaontin'ny orinasa izany dia azonao atao ny miditra amin'ireo lahatahiry sy fifandraisana izay notahirizinao tamin'ny mpizara. Izy io dia manana fantsom-pifandraisana miray mijery raha vao jerena ireo mailaka voaray rehetra. Ireo maodelin'ny lohan-taratasy dia mampiorina tsara ny mailaka ataonay. Tsy misy afa-tsy amin'ny iPad azy io. Vidiny: maimaim-poana.
Mail + ho an'ny Outlook. Na eo aza ny anarana dia tsy misy ifandraisany amin'i Microsoft izany. Io dia voafetra amin'ny kaonty mailaka 3 ihany, izay mahatonga azy io ho an'ny sarany izay kely indrindra atolotra azy. Tahaka ny Incredimail, azonao atao ny miditra amin'ny lahatahiry izay notahirizinao tao amin'ny kaontin'ny orinanao. Ny kinova ho an'ny iPad dia ampiasaina amin'ny iPhone ihany koa. Ny fampiharana dia manana safidy hanakanana ny fidirana, amin'ity fomba ity ary avelanao ho an'ny olona fantatrao ny iPad, tsy afaka miditra amin'ny mailakao izy ireo. Asa iray izay tsy ananan'ny programa mailaka hafa dia ny mety, arakaraka ny fomba fitantanananao mailaka, ny fahazoana miditra amin'ny fandaharam-potoana iphone handaminana fotoana voatendry na fivoriana nefa tsy mila miala amin'ny app. Vidiny: 5,49 euros.
Evomail. Ho an'ny mpampiasa Mailbox izay maniry ny hahafahan'izy ireo manampy kaonty mailaka avy amin'ny mpizara samihafa ary afaka mankafy ny fiasan'ity app ity, ity no tena tadiavinao. Mitovy amin'ny estetika sy ny fiasa amin'ny MAILBOX, fa ity mamela anao hanisy kaonty POP / IMAP, Yahoo ary ICloud. Vidiny: maimaim-poana.
Sparrow, dia iray amin'ireo mpitantana mailaka voalohany ho an'ny iPhone. Fampiharana tena tsara, mora ampiasaina ary tena tsara tarehy. Rehefa saika hanomboka ny fampiharana iPad izy ireo dia nividy ilay orinasa i Google ary nifarana teo ilay tetikasa. Tsy nisy zavatra hafa re avy taminy. Raha ny marina dia afaka milaza ianao fa ny Gmail dia kinova maoderina an'ny Sparrow. Mila mitsidika tranonkala fotsiny ianao www.ravolar.ee hahita ny hafatra milaza fa niditra tao amin'ny ekipa Gmail ny ekipa Sparrow.
Fampahalalana bebe kokoa - Navoaka ny mailbox mamela anao hikaroka ao amin'ny Gmail rehetra, Nohavaozina ny Gmail miaraka amin'ny fahafaha-mijery ireo miraikitra amin'ny efijery feno.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Leo ny mailaka? Safidy hafa hitantanana mailaka amin'ny iPad: Incredimail, Mail + ho an'ny Outlook ary Evomail.
Tutorial: Ahoana ny fomba fampandehanana ny fanairana Amber sy Emergency amin'ny iPhone
Tutorial: Makà fanampiny 1GB ao amin'ny Dropbox miaraka amin'ny mailbox app